यी चार महिनामा जन्मने महिला हुने गर्छन् लक्ष्मीको रुप : हेर्नुहोस् कुन-कुन हुन् ती चार शुभ महिना ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी चार महिनामा जन्मने महिला हुने गर्छन् लक्ष्मीको रुप : हेर्नुहोस् कुन-कुन हुन् ती चार शुभ महिना !
फरक-फरक महिनामा जन्मने व्यक्तिको छुट्टै-छुट्टै भाग्य हुने गर्छ भने व्यवहार पनि रहने गर्छ। कुनै व्यक्ति यति धेरै भाग्यशाली हुने गर्छन् की जे काममा पनि सफलता हुने गर्छन्। हिन्दु धर्म अनुसार लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनिने गरिन्छ भने सौभाग्यको पनि प्रतीकको रुपमा लिने गरिन्छ। आज हामी यस लेखमा केहि चार महिनामा जन्मने महिला अथवा युवतीहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौ। यी महिनामा जन्मने महिलाहरु धेरै भाग्यशालि हुने गर्छन्।
यस महिनामा जन्म लिने महिलाहरु प्राय विनम्र हुने गर्छन् भने बुद्धिमान पनि हुने गर्छन्। यस महिनामा जन्म लिने महिलाहरुको विवाह पनि भाग्य पनि चम्कने गर्छ। साथै ग्रह चालले पनि जहिले साथ दिने हुँदा परिवारलाई धेरै फाइदा मिल्ने गर्छ। जसका कारण यस महिना जन्म लिने महिलाहरुलाई लक्ष्मीको रुप मानिने गरिन्छ।
यस महिना जन्म लिने महिलाहरुको ग्रह स्थिति धेरै राम्रो अवस्थामा रहने गर्छ। जसका कारण आफ्नो लक्ष्यमा धेरै छिटो पुग्ने गर्छन्। साथै भाग्यले पनि जहिले साथ् दिने हुँदा सजिलै प्रगति गर्ने गर्छन्। विवाह पछि पनि यस महिना जन्म हुने महिलाहरुले आफ्नो पतिको लागि पनि धेरै शुभ हुने गर्छन्।
शास्त्रका अनुसार यस महिना बच्चाको जन्म हुनुलाई खासै राम्रो मानिने गरिंदैन। तर यस महिना जन्म लिने महिलाहरुलाई भने जहिले पनि भाग्यको साथ मिल्ने गर्छ। यस महिना जन्म लिने महिलाहरु जुझारू र कर्मठ हुने गर्छन्। आफ्नो मिहिनेतमा विश्वास गर्ने हुँदा पनि यस प्रकारका महिलाहरुलाई भाग्यको साथ् मिल्ने गर्छ।
यस महिना जन्म लिने महिलाहरुको कुण्डलीमा चन्द्र बुध र शुक्र ग्रहको साथ हुने गर्छ। जसका कारण यस महिना जन्म लिने महिलाहरुलाई भाग्यको साथ जसको अवस्थामा पनि मिल्ने गर्छ। आफुले चाहेको सम्पूर्ण चाहना पुरा गर्नको लागि खासै मिहिनेत नगरी मिल्ने गर्छ। यस महिना जन्म लिने महिलाहरुको विवाह धेरै धनि व्यक्तिसँग हुने गर्छ।